Sajhasabal.com | Homeअहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? कुन देशमा के छ नियम ? हेर्नुहोस्
फागुन १४, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको वैदेशिक रोजगार बिस्तारै लयको बाटोमा फर्किंदै छ । गत माघ महिनामा मात्रै १७ हजार ८ सय ८७ जना विदेशिएका छन् ।
नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आ-आफ्ना देशमा नयाँ नियम बनाएर लागू गराएका छन् । नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतिपय देशले कोरोनाका कारण विदेशी कामदार लिएका छैनन् । केही देशमा काम गर्न जानेले पनि तीन पटकसम्म पीसीआर परीक्षण र महँगो शुल्क तिरेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका छन् । कुन देशमा के नियम लागू भएको छ, जानीराखौं ।
यूएईले भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट भिजिट भिसामा गएका नागरिकहरूलाई फिर्ता (राउण्ड ट्रिप) टिकट नभएसम्म प्रवेश नदिने नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ ।
पछिल्लो समय भिजिट भिसामा धेरै विदेशी नागरिक यूएई भित्रिन थालेपछि कडाइ गर्ने थालेको हो । भिजिट भिसामा गएका विदेशी नागरिकको साथमा होटल बुकिङ र फिर्ता टिकट नभए दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अल मोक्तुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काउन थालेको छ । हाल युएईले सरकारी र गैर सरकारी कम्पनीका लागि मात्र नयाँ विदेशी श्रमिक ल्याउन भिसा दिंदै आएको छ । युएईले यी कम्पनीमा बाहेक निजी क्षेत्रका कम्पनीमा नयाँ श्रमिक लिएको छैन भने पुन: श्रम स्वीकृति लिएर जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मलेसियाले कोरोना भाइरसको माहामारी नियन्त्रण गर्न जारी गरेको आवागमन नियन्त्रण आदेश (एमसीओ) को समय मार्चसम्म बढाएको छ । जनवरी १३ देखि फेब्रुअरी १८ सम्मका लागि जारी गरेको एमसीओ ४ मार्चसम्म पुर्‍याइएको छ ।
मलेसियामा नेपालीहरु नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानको लागि बन्द छ भने पुन श्रम स्वीकृति लिएर भने जान सकिनेछ । कोरोना कारण देखाउँदै मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिक ल्याउन लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन ।
कतारले कोरोना भाइरसको महामारीबीच पनि विदेशी कामदार लिएको छ । कतारले सन् २०२२ मा हुने विश्वकपलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना महामारीबीच पनि कामदार भित्र्याइरहेको छ । कतार सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न ३२ बुँदे सूचना जारी गरेको थियो । जारी गरिएको ३२ बुँदे नियम पालना नगर्ने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई २ लाख रियाल जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
३२ बुँदे सूचनामा मोबाइलमा इतराज एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको हुनुपर्ने, बाहिर निस्कँदा मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने, क्याम्पभित्र ५ र खुला स्थानमा १५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नहुने, सार्वजनिक स्थल वा समुद्री किनारामा १५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नहुने, सवारीसाधनमा चालकसहित चार जनाभन्दा बढी यात्रा गर्न नपाइने व्यवस्था छन् ।
साउदी अरेबियाले पुनः प्रवेश भिसामा नयाँ नियम लागू गरेको छ । साउदीमा कार्यरत रही पुनः प्रवेश भिसामा घर फर्किएका आप्रवासी श्रमिकलाई भिसामा म्याद सकिनुअघि फर्किन आग्रह गरेको छ । भिसामा अवधिभित्र नफर्किए तीन वर्षसम्म साउदी अरब प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
साउदीले २० देशबाट रोजगारीका लागि आउने आप्रवासीहरूको आगमनलाई अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ । भारत, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डोनेसिया, आयरल्यान्ड, इटाली, जापान, लेबनान, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड. टर्की, यूएई, बेलायत र अमेरिकाका आप्रवासी श्रमिकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपालबाट जाने श्रमिकका हकमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारमा बहराइन जाने विदेशी श्रमिकहरूले तीन पटकसम्म कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । बहराइन सरकारले फेब्रुअरी २२ देखि लागू हुने गरी बहराइन प्रवेश गर्न थप दुई पटक पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गर्ने नियम लागू गरेको छ ।
रोजगार अवथा अन्य काममा बहराइन पुगेका विदेशी नागरिकले विमानस्थलमा एक पटक, त्यहाँ पुगेको पाँच दिनमा अर्को पटक र १० दिनभन्दा बढी समय बहराइनमा बसे पुनः पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
कुवेतले रोजगारीका लागि आउने ६८ देशको विदेशी श्रमिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । रोजगारीमा कुवेत जाने विदेशी कामदारले भने अनिवार्य ७ दिन संस्थागत क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि ७ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बसेपछि मात्र काम फर्कन पाउँछन् । क्वारेन्टाइन खर्च कामदार आफैँले व्यहोर्नुपर्छ ।
हाल ओमानबाट नयाँ डिमाण्ड आउनेक्रम शुरु भएको छ । नयाँ तथा पुन: श्रम स्वीकृति लिएर ओमान जान सकिनेछ । रोजगारीमा ओमान जाने कामदारले नेपालमा एक पटक र ओमान पुगेपछि दुई पटक आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ ।
दक्षिण कोरिया सरकारले प्रवेशाज्ञा (भिसा) सम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेको छ । कोरियामा कार्यरत नेपाललगायत देशका श्रमिकको कोरोना कारण भिसा अवधि १३ महिना थपिएको छ । विशेष गरी प्रवेशाज्ञा अवधि सकिएर पनि कोरोनाका कारण स्वदेश फर्कने अवस्था नभएका श्रमिकलाई अवधि थपिएको कोरियाको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सुविधा अस्थायी मौसमी कामदारका हकमासमेत लागू हुने बताइएको छ ।
दक्षिण कोरियाले दिएको सुविधाअनुसार विदेशी श्रमिकले सन् २०२२ को मार्च ३१ सम्म प्रवेशाज्ञा थपका लागि आवेदन दिन पाउँछन् । यो नियम आगामी मार्च २ देखि लागू हुनेछ । कोरियामा गत डिसेम्बरदेखि कोरोना माहामारीको तेस्रो लहर फैलिएसँगै जनवरी अन्तिमसम्म रोजगारी गुमाउने श्रमिकको संख्या ९ लाख ८२ हजार पुगेको छ । यो संख्या ३ वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च रहेको कोरियाको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरियामा होटल, उद्योग, रेस्टुरेन्ट तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कामदारले रोजगारी गुमाएको जनाइएको छ । बेरोजगारीदर बढेसँगै विदेशी कामदारको संख्या कटौती हुने सम्भावना बढेको छ । कोरियन भाषा पास गरेका १० हजार नेपाली कोरिया जान प्रतीक्षारत छन् ।